मोबाइल सिरानी छेउ ? हुनसक्छ क्यान्सर !
एजेन्सी– अहिले त हाम्रो मोबाइल बोक्नु कुनै रमाइलो होइन, बाध्यकारी जीवनशैली जस्तै भइसकेको छ । मोबाइल नहुने हो भने केही समय पनि कटाउन गाह्रो हुन्छ । बेलुकी विस्तारामा होस् या बिहान उठ्ने वित्तिकै हामी मोबाइल चलाउन थालिहाल्छौँ । तर, बेलायतको एक्जिटरलगायतका केही विश्वविद्यालयमा गरेको अध्ययनले सिरानी छेउ मोबाइल राखेर सुत्दा निकै धेरै समस्या आउन सक्ने पत्ता लगाएको छ । अध्ययनअनुसार मोबाइललाई सिरानी छेउ राख्दा क्यान्सरमात्र होइन, नपुंसकता पनि हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति : फागुन १७, २०७७ साेमबार २३:३३:२९,